Shanyira USA: Chaizvo zvitsva zvinodiwa zvekupinda zveUnited States
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Shanyira USA: Chaizvo zvitsva zvinodiwa zvekupinda zveUnited States
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Shanyira USA: Zvitsva zvekupinda zvinodiwa zveUnited States.
Vese vagari vemuUS pamwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vakabayiwa zvizere nhomba vanofanira kufamba neumboo hwemamiriro avo ekudzivirira kuti vape ndege yavo vasati vasimuka kuenda kuUnited States.
Biden Administration yakazivisa mutemo mutsva wepasi rose wekufamba nendege wakaomarara, unoenderana nepasirese, uye uchitungamirwa nehutano hweveruzhinji.
Kutanga munaNovember 8, vafambi vendege vekune dzimwe nyika kuenda kuUnited States vanozodikanwa kuti vabatwe zvizere uye nekupa humbowo hwekudzivirira vasati vakwira ndege kuti vabhururuke kuenda kuUnited States,
Vafambi vendege vakabayiwa zvizere vacharamba vachidikanwa kuratidza magwaro ekuongororwa kwehutachiona hwehutachiona husati hwasimuka kubva pamuenzaniso wakatorwa mukati memazuva matatu erwendo kuenda kuUnited States vasati vakwira.
Kubva munaNovember 8 nyika dzakabatana iri kushandura zvinodikanwa zvevaraidzo nevafambi vebhizinesi kuti vapinde muUS.
United States Dhipatimendi reHurumende yakaburitsa itsva COVID-19 Vaccinations uye Testing yeInternational Travel nhungamiro nhasi.
Kutanga munaNovember 8, vafambi vendege vekunze kune imwe nyika nyika dzakabatana achadiwa kuti abaiwa zvizere uye kuti ape humbowo hwemamiriro ekudzivirira asati akwira ndege kuti abhururuke kuenda kuUnited States, kunze kwezvishoma.
The CDC yakasarudza kuti nechinangwa chekupinda mu nyika dzakabatana, majekiseni anogamuchirwa achasanganisira aya akatenderwa kana kuti akatenderwa neFDA, pamwe nejekiseni rine chinyorwa chekushandiswa kwechimbichimbi (EUL) kubva kuWorld Health Organisation (WHO). Ona cdc.gov kuti uwane rumwe ruzivo.
Vafambi vendege vakabayiwa zvizere vacharamba vachidikanwa kuratidza magwaro ekuongororwa kwehutachiona hwehutachiona husati hwasimuka kubva pamuenzaniso wakatorwa mukati memazuva matatu erwendo kuenda kuUnited States vasati vakwira. Izvi zvinosanganisira vese vafambi - vagari vemuUS, vagari vepamutemo zvachose (LPRs), uye vatorwa.
Kuenderera mberi nekusimbisa dziviriro, vafambi vasina kubayiwa - vangave vagari vekuUS, LPRs, kana nhamba diki yevatorwa vasina kubayiwa vekunze - zvino vachada kuratidza zvinyorwa zvekuongororwa kwehutachiona husina kunaka kubva kumuenzaniso wakatorwa mukati mezuva rimwe rekufamba kuenda kuUnited States.
Humbowo hwejekiseni hunofanirwa kunge huri bepa kana rekodhi redhijitari rakapihwa nevepamutemo uye rinofanirwa kusanganisira zita remufambi uye zuva rekuzvarwa, pamwe nejekiseni chigadzirwa uye zuva (ma) rekutonga pamadosi ese akagamuchirwa nemufambi.
Kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, humbowo hwejekiseni hunozodiwa - kunze kwekunyanya kushoma - vasati vasimuka kuenda kuUnited States.
Kunyange humbowo hwekudzivirira husingadikanwi kuvagari vemuUS neLPRs, vagari vemuUS vakabaiwa zvizere vagari vemo uye maLPR (nevanovimba navo) vacharamba vachikwanisa kuratidza magwaro ekuongororwa kwehutachiona husina kunaka kubva kumuenzaniso wakatorwa kusvika mazuva matatu vasati vasimuka kuenda kuUnited States. . Vanofanira kupa humbowo hwejekiseni kuti vakwanise kuwana 3-day test window. Vagari vekuUS nemaLPR vasingakwanise kuratidza kuti vakabaiwa zvizere vachafanira kuratidza magwaro ekuongororwa hutachiona husina kunaka hwakatorwa pasina kupfuura zuva rimwe chete vasati vasimuka.
Pamusoro pekusimbisa humbowo hwekutanga-kubva kwakashata bvunzo mhedzisiro - izvo zvavakaita kubva muna Ndira 2021 - ndege zvino dzicharatidzawo mamiriro ekudzivirira.
Vapfuuri vachada kuratidza chimiro chavo chekudzivirira, kungave kuburikidza nerekodhi rekodhi, foto rekodhi rekodhi yavo, kana dhijitari app.
Matanidza zita uye zuva rekuzvarwa kuratidza kuti mutakuri ndiye munhu mumwechete anoratidzwa paumboo hwejekiseni;
Sarudza kuti rekodhi yakapihwa nevepamutemo sosi (semuenzaniso, sangano rehutano reveruzhinji, sangano rehurumende) munyika makapihwa jekiseni;
Wongorora ruzivo rwakakosha kuti uone kana mutyairi asangana netsanangudzo yeCDC yekubaiwa zvizere senge chigadzirwa chekudzivirira, nhamba yemishonga yekudzivirira yakagamuchirwa, zuva (ma) rekutonga, saiti (semuenzaniso, kiriniki yekudzivirira, nzvimbo yehutano) yekudzivirira.
Vana vari pasi pemakore gumi nemasere vanoregererwa kubva kune chinodiwa chejekiseni kune vafambi vekunze, zvichipihwa zvese kusakodzera kwevamwe vana vadiki kubayiwa, pamwe nekusiyana kwepasi rose mukuwaniswa kwejekiseni kuvana vakura vanokodzera kubaiwa.
Vafambi vanofanirwa kuratidza zvinyorwa zvehutachiona hweCCIDID-19 bvunzo mhedzisiro kana zvinyorwa zvekupora kubva kuCOVID-19 mukati memazuva makumi mapfumbamwe apfuura vasati vakwira ndege kuenda kuUnited States (kana vasati vakwira ndege yekutanga munhevedzano yekubatanidza kwakarongedzerwa zvakafanana. rwendo rwokuenda kuUnited States).
Ose ari maviri nucleic acid amplification bvunzo (NAATs), senge PCR bvunzo, uye maantigen bvunzo anokodzera.
Iyo yekuzviongorora wega inogona kushandiswa kana ikasangana nezvinodiwa zveodha kusanganisira chaiyo-nguva proctoring ne telehealth sevhisi yakabatana nemugadziri webvunzo uye iyo inoburitsa bvunzo mhedzisiro inogona kuongororwa nendege isati yakwira.
Uyu ndiwo muyero wakafanana webvunzo dzekukodzera wakashandisa kune pre-kuenda bvunzo zvinodiwa kubva muna Ndira.
Muedzo haufanirwe kuitwa mazuva anopfuura matatu ekarenda zuva risati rasvika kundege yepasi rose kuenda kuUnited States.
Saka, kana mufambi achienda kuUnited States na10 PM musi wa19 Ndira, anotofanira kuunza mhedzisiro yebvunzo yakatorwa chero nguva mushure me12:01 AM musi wa16 Ndira.
Pakutanga, vafambi vese vaifanirwa kuratidza mhedzisiro yekuedza isina kunaka mukati memazuva matatu ekufamba kuenda kuUnited States.
Kune avo vagari vemuUS uye maLPR vanogona kuratidza kuti vakabaiwa zvizere, izvo zvinodiwa zvinoramba zvakafanana - vanofanirwa kuratidza zvinyorwa zvemhedzisiro yebvunzo kubva kumuenzaniso wakatorwa mukati memazuva matatu ekufamba.
Izvi zvinoreva kuti vese vagari vekuUS vakabaiwa zvizere vagari vemo uye LPRs vanoenda kuUnited States vanofanirwa kunge vakagadzirira kuunza magwaro emamiriro avo ekudzivirira padivi pemhedzisiro yavo yebvunzo.
Vagari vemuUS uye maLPR vasingakwanise kuratidza humbowo hwejekiseni rakazara vanozofanira kuratidza zvinyorwa zveyedzo yakaipa kubva kumuenzaniso wakatorwa mukati mezuva rimwe rekubva.
Nzira iri nyore yekudzivisa kuzadzisa zvinodiwa izvi ndezvekuti vafambi vanobaiwa.
Isu tinotenda kuti ruzhinji rwevafambi vekune dzimwe nyika vachange vatobaiwa zvizere uye avo vasati vagara uye vanokodzera vanofanirwa kubaiwa vasati vafamba.
Over-the-counter proctored bvunzo dziri kuwanikwa zvakanyanya muUnited States, saka vagari vemuUS vanoenda kunze kwenyika vanogona kuunza proctored test kit pavanenge vabva kuUS yavanogona kutora vasati vadzokera kumba. Uye tine chivimbo chekuti pachave nekuwanikwa kwakakwana pasi rose zvakare.
Nekudaro, kune zvakare nzira yekuregera iripo kubva kune pre-kuenda kuyedza kunodiwa kana bvunzo yakakodzera isipo.